जब बच्चा सानो हुन्छ तब उसको हरेक काम मुश्किल हुन्छ तर सबैभन्दा मुश्किल काम उसको कान सफा गर्नु नै हुन्छ । कान सफा गर्नाले न की कानको फोहोर निस्किन्छ बरु डेड सेल्स पनि निस्किन्छ । कानमा बस्नेबाला वैक्स एक साधारण पदर्था हुन्छ जो सबै मानिसहरुको कानबाट निस्किनछ, यो कुनै प्रकारले संक्रमण हुदैन र न त यसले बचचालाई सुन्ने क्षमतामा असर पार्दछ । तर यदि तपाईको बच्चाको कानमा धेरै बढी वैक्स निस्कियो भने डाक्टरसँग सल्लाह अवशय लिनुस् ।
सानो बच्चाको कान सफा गर्दाको समयमा केयौ कुराहरुलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक हुन्छ । बच्चाहरुको कान सफा गर्नको लागि क्यू टिप्सको प्रयोग नगर्नुहोस् । बच्चाको कानमा कुनै पनि नुकिला चीज नछिराउनुस् नत्र चोट वा घाउ हुने खतरा हुन सक्छ । बच्चाको कानलाई सधै सही तरिकाले मात्र सफा गर्नुहोस् । ज्यादै सावधानी अपनाएर र ध्यान दिएर । यहाँा बच्चाको कानलाई सुरक्षित रुपले सफा गर्ने केही टिप्सहरु बताइरहेको छु ।्
१। नुहाउँदाको समयमा सफा गर्नुहोस्ः clean baby ears after swimming
बच्चाको कानलाई सफा गर्नुलाई सबैभन्दा राम्रो समय उसलाई नुहाउनुभनदा पहिले हुन्छ । मालिश पछि तपाईको बच्चाको कानलाई सावधानीपर्ूवक सफा गर्नुहोस् । यो समय कानहरुमा रुखापना हुदैन र वैक्स सजिलै निस्किन्छ । २। तातो कपडाले पोछनुहोस्ः clean baby’s ears with cloths
३। कटन स्वैबस न छिराउनुहोस् ।
4. इअर ड्रप : ear drop
5। घरेलु औषधीहरको प्रयोग नगर्नुस् ः Don’t use homemade medicine
6. सावधान रहनुस्ः Be aware
7. ड्राइ भएपछि सफा नगर्नुस् । Don’t clean baby ear after dry